Ihe nlere: Gọọmentị na arụpụta ọrụ na akwụkwọ niile, ihe ngosi na ozi ịntanetị | Martech Zone
Ihe Nlere: Gọọmentị na arụpụta ọrụ na akwụkwọ niile, ihe ngosi na ozi ịntanetị
Ka ị na-eleba anya n'ime nzukọ gị iji chọta ohere, ha na-abanyekarị na ozi. Site na ire ahịa gaa ahịa, ire ahịa nye ndị ahịa, ndị ahịa ịla azụ ahịa, na ire ahịa laghachi na ahịa. Na ụwa dijitalụ, data a niile na-edegharị, na-edezi ma na-ede akwụkwọ enweghị isi. Enwere ike ịmepụta ndebiri maka usoro ọ bụla na otu ọ bụla iji hụ na nrube isi, nkwekọ aha, yana akwụkwọ kachasị mma.
Ihe Nlereanya ejiri ụdị nile eji edozi ụwa. ihe ha na-akpọ, Akwụkwọ Ọchịchị. Nke a bụ otu Templafy na-eme ka ọ dịrị onye ọ bụla mfe ịnọgidesi ike na irube isi mgbe ị na-eke akwụkwọ, ngosi na ozi ịntanetị.
Templafy nwere atụmatụ na uru ndị a:
Pnweta Template & Content - Akwụkwọ azụmahịa, slide, onyonyo, ederede ederede na akụ dijitalụ ndị ọzọ dị ozugbo ebe onye ọ bụla chọrọ ha.
Nhazi Di omimi - All ndebiri ụlọ ọrụ na-akpaghị aka imeghari na onye ọrụ profaịlụ na-agwakọta ụlọ ọrụ ọhụụ na ozi nkeonwe. Oge ọ bụla onye ọrụ na-emepụta akwụkwọ, Dynamics na-akpaghị aka ichebara ndị ihe di omimi nke ndebiri akwụkwọ na ọrụ onye ọrụ ahụ na ọrụ gị.
Akwụkwọ akpaaka - Ndị ọrụ na-ahazi akwụkwọ ndị dị mgbagwoju anya site na ajụjụ dị mfe. Ndị nchịkwa nwere ike ịtọ ndebiri akwụkwọ dị elu, dịka nkwekọrịta ma ọ bụ amụma, nke mere na a na-eduzi ndị ọrụ site na nhọrọ dị mfe iji wuo akwụkwọ edepụtara maka otu ebumnuche.
Ika & Nkwado ọdịnaya - A na - enyocha ihe ngwongwo dị ka mkpụrụ akwụkwọ, agba ụlọ ọrụ na akara ngosi maka nnabata ma melite ya. N'agbanyeghị otu akara kacha mma nke ndị otu akara ama ma ọ bụ nnabata, ọ ga-abụrịrị na ndị ọrụ ga-ejigharị akwụkwọ ochie na ihe ngosi site na desktọpụ ha. Nke a na - edugakarị na akwụkwọ na - enweghị ike idebe akwụkwọ.
Email Mbinye aka Manager - Jikwaa jikwaa na-akara, na-ekwenye ekwenye na aha ụlọ ọrụ aha email niile. Templafy na-enye igwe ojii dabere na ngwọta, nke akwadoro na Microsoft Azure, ka jikwaa ntinye aka email nke Microsoft Outlook na Office 365.
Tags: njikwa akwụkwọnjikwa mbinye aka emailemail mbinye aka ahiaedebanye aha emailmicrosoft 365microsoft azurenjikwa ndebiri
Gịnị bụ Virtual Adị?
Index Ndenye Mgbawa: A Ngwa ngwa, Mma EMV Ahụmahụ